Misaona ny mozika malagasy: nodimandry i Lalao (Feon’ala) | NewsMada
Misaona ny mozika malagasy: nodimandry i Lalao (Feon’ala)
Par Taratra sur 25/03/2019
Mbola manjombona hatrany ny lanitry ny zavakanto sy ny mozika malagasy. Araka ny voalaza ao amin’ny pejy “facebook” an’ny tarika Feon’ala, izay nohamafisin’i Lolona Randriamisandrazana, mpikambana teo aloha, nodimandry ny alin’ny asabotsy hifohy alahady teo i Lalao, tovovavy voalohany nandrafitra ny tarika, niaraka tamin’i Rosette.
Hatreto, tsy mbola fantatra ny antony nitarika ny fahafatesany sy ny fotoana hanatanterahana ny fandevenana. Tsiahivina fa endrika tsy zovina amin’ny Malagasy i Lalao, ilay manana feo manga sy miavaka, nampisongadina ny tarika Feon’ala, tamin’ny taona 80 tany ho any. Izy no anisan’ny nampalaza ny tarika, tamin’izany fotoana izany.
Maro ireo solofo dimbin’ny ala, nifandimby nandray ny toeran’izy ireo, taty aoriana, saingy tsy am-pisalasalana ny ilazana fa niavaka sy nitàna ny maha izy azy ny tarika ry Lalao. Ny gazety Taratra dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana.